दोषी ठहर भएमा नायिका साम्राज्ञी कति वर्ष जेल बस्नु पर्छ ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/दोषी ठहर भएमा नायिका साम्राज्ञी कति वर्ष जेल बस्नु पर्छ ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं । अभिनेता भुवन केसी र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको विवाद न्यायालयमा पुगेको छ ।
केही समययता सामाजिक सञ्जालमा वाकयुद्धमा रहेको उनीहरुको विवाद शुक्रबार न्यायालयमा पुगेको हो ।अभिनेता भुवनले नायिका साम्राज्ञीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । यसअघि साम्राज्ञीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै अभिनेता भुवनले चलचित्र कलाकार संघमा निवेदन पनि दिएका थिए । तर, यतिमै सिमित नरहेका भुवन अन्ततः न्यायालयमा पुगेका हुन् ।
यसअघि अभिनेत्री साम्राज्ञीले विभिन्न तीनवटा चलचित्रमा काम गर्दा र जापानमा एउटा अवार्ड कार्यक्रमका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार भएको सामाजिक सञ्जालबाट आरोप लगाएकी थिइन् । तर, सो आरोप खण्डन गर्दै भुवनले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप निराधार र मनगढन्ते भएको दाबी गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल ’इन्स्टाग्राम’ मा भिडियो पोस्ट गर्दै अभिनेत्री साम्राज्ञीले भनेकी थिइन्, ‘मैले १७ वर्षको उमेरमै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेँ। त्यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र सानो भएकाले सबै कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनियो । यहाँ जसको शक्ति छ, उसैले यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ। यस्तो बेला म भर्खर चलचित्रमा आएको मान्छेले यो कुरा बाहिर ल्याउँदा मेरो लागि ढोका बन्द हुन्छ भनेर सम्झाउँथे।
अंकलजस्तो उमेरको मान्छेलाई त्यही भनेर सम्बोधन गर्दा ‘दाइ’ भनेर बोलाऊ भन्थे । कामको विषयमा केही कुरा गर्नुपरे गालामा टाँसिएर बोल्न आउँथे। त्यो कुरा अलि पर बसेर भन्न सकिँदैन थियो र ? मलाई त्यतिबेला नै भित्रबाट घिन लागेको थियो, तर हाँसेरै बोलिदिएँ। मेरो परिवारलाई फिल्म क्षेत्रको विषय केही ज्ञान छैन। मैले पनि त्यतिबेला यो कुरा नजरअन्दाज गरेँ तर आखिरमा सबैको असली रूप बाहिर आएको छ।’
अहिलेसम्म आठ वटा फिल्ममा काम गरेकी उनले तीमध्ये तीन वटामा नराम्रो अनुभव भोग्नुपरेको बताएकी थिइन् । साम्राज्ञीले भुवन केसी निर्माता रहेको ‘ड्रिम्स’ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी थिइन्। साम्राज्ञीले सो भिडियो सार्वजनिक गरेपछि भुवनसँगको विवाद बढ्दै गएको हो ।
यसको प्रतिरक्षा गर्दै भुवनले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ दिएका थिए । विवाद साम्य नभएपछि शुक्रबार भुवनले १० करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै नायिका साम्राज्ञीविरुद्ध गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
दोषी देखिए साम्राज्ञीलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
विवाद न्यायालयमा पुगेसँगै यसको न्याय निरुपणको पर्खाइमा भुवन र साम्राज्ञी रहेका छन् । मौजुदा कानुनले कसैको गाली बेइज्जती गर्न रोकमात्रै लगाएको छैन दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । साम्राज्ञीलाई दोषी देखिए उनलाई कस्तो सजाय हुन सक्छ अहिले भन्न सकिँदैन, किनकि गाली बेइज्जतीलाई छुट्टाछुट्टै दफामा राखेर जरिवाना र कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ । रिट निवेदक भुवनले साम्राज्ञीले गाली बेइज्जती गरेको दुवै उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले गाली र बेइज्जतीलाई छुट्टाछुट्टै दफामा व्याख्या गर्दै फरक फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संहिताको दफा ३ को उपदफामा गाली गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल ’इन्स्टाग्राम’बाट आरोप लगाएको हुँदा यदि आरोप पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा साम्राज्ञीमाथि विद्युतीय माध्यमबाट बेइज्जती गरेको कानुन आकर्षित हुन सक्छ ।
सुम्निमाले कक्षा १२ को परीक्षामा गरिन् ‘नेपाल टप